Uyilo lweBlackmagic lubhengeza iNew Blackmagic Web Presenter HD | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » iindaba » Uyilo lweBlackmagic lubhengeza iNew Blackmagic Web Presenter HD
Umthumeli omtsha osasaza ixesha lokusasaza kubandakanya i-encoder enamandla ye-H.264 yokusasaza ngqo kwiYouTube, Facebook, Twitter nangaphezulu!
I-Fremont, CA, e-USA-ngolwesiThathu, nge-17 kaFebruwari 2021 - Blackmagic Design namhlanje ubhengeze uMbonisi weWebmnyama omtsha weBlackmagic HDIsisombululo sokusasaza esizimeleyo esibandakanya iprosesa esemgangathweni ye-H.264 processor yokusasaza ngokuthe ngqo kumaqonga anjengeYouTube, Facebook, Twitter nangaphezulu. Umnikezeli weWebhu omtsha HD Uyilo lwecompact olubandakanya igalelo le-12G-SDI ngesiguquli esisezantsi, ukuze abathengi bakwazi ukunxibelelana nayo HD or Ultra HD izixhobo kunye nokusasaza ividiyo epheleleyo ye-1080p. Kwakhona kubandakanywa iphaneli yangaphambili kunye neLCD kunye namamenyu, izixhobo zewebhu ze-USB, kunye neefowuni ezizodwa zokubeka iliso kwiimitha zomsindo, isimo sokusasaza kunye ne-SDI epheleleyo kunye neenkcukacha zobuchwephesha ezifakwe.
Umnxibelelanisi wewebhu we-Blackmagic HD ifumaneka kwangoko kwi Blackmagic Design abathengisi behlabathi jikelele kwi-US $ 495.
IBlackmagic Web Presenter sisisombululo esigqibeleleyo sokusasaza esine-injini yobuchwephesha yokusasaza ngokuthe ngqo nge-Ethernet kwiYouTube, Facebook, Twitter nangaphezulu. Kufana nje nokusasaza umabonwakude wanamhlanje kubaphulaphuli abasasaza kwihlabathi liphela. Ngapha koko eyakhelwe kunxibelelwano lwe-USB isebenza njengekhamera yewebhu, ke abathengi banakho ukuqhagamshela ikhompyuter kwaye basebenzise nayiphi na isoftware yokusasaza, okanye iSkype okanye iZoom. Ukulungiselela ukungafuneki, abathengi banokusasaza kwi-intanethi nge-Ethernet okanye badibanise ifowuni ye-5G okanye ye-4G ukusebenzisa idatha yeselfowuni. Ummeli weWebhu ukwabandakanya imveliso yokujonga esweni ebandakanya ividiyo, iimitha ezimanyelwayo, iigrafu zokuhamba kunye nedatha yezobuchwephesha ye-SDI.
IBlackmagic Web Presenter ixhasa amaqonga osasazo aziwayo. Kwaye eyakhelwe kwiinjini yokusasaza eyenzelwe ukuba isasaze ngqo kumgangatho wosasazo lobungcali. Oko kuthetha ukuba abathengi bafumana isisombululo esizimeleyo sokusasaza bukhoma okusebenzayo ngaphandle kwezakhelo ezilahliweyo. Abathengi kufuneka badibanise kwi-intanethi kuphela. Ukuseta kulula, njengoko isoftware yoMncedisi weWebhu evumela abathengi ukuba bakhethe iqonga lokusasaza kunye nokuhlaziya isitshixo sokuhambisa.
I-Blackmagic Web Presenter sisisombululo esizimeleyo esibandakanya isixhobo esinamandla sokufaka izixhobo zekhompyuter, isoftware yokuqhagamshela kumaqonga okusasaza, kunye nonxibelelwano lwenethiwekhi. Oko kuthetha ukuba abathengi akufuneki bathenge ikhompyuter ebiza kakhulu okanye basebenzise isoftware yokusasaza enzima. Qhagamshela ngokulula umthombo wevidiyo we-SDI njengokutshintsha kwemveliso bukhoma okanye ikhamera, emva koko uqhagamshele kwi-intanethi usebenzisa eyakhelwe kunxibelelwano lwe-Ethernet. Okanye fakela ifowuni yakho ukuze usebenzise idatha yeselfowuni. Ngoseto olwakhelwe kumaqonga asasazwayo, abathengi bafuna ukufaka isitshixo sokuhambisa kwaye ucinezele emoyeni. Ngakumbi abathengi banokusebenzisa ngaxeshanye imveliso yekhamera ye-USB ukunxibelelana nekhompyuter, ivumela enye isoftware yevidiyo ukuba isetyenziswe.
Ukuba abasebenzisi bayasasaza basuka kwindawo ekude, okanye abathengi bafuna ukhuphelo lonxibelelwano oluphambili lwe-Ethernet, abathengi banokufaka kwi-Apple okanye kwifowuni ye-Android ukunxibelelana ne-intanethi ngedatha yeselfowuni. Ukulungiselela lula, kukho unxibelelwano lwe-USB kuzo zombini iphaneli yangaphambili kunye nangasemva enokusetyenziselwa iifowuni zokubethela. Kwaye isebenza kunye nesantya esiphezulu seefowuni ze5G, kunye neefowuni ze4G. IBlackmagic Web Presenter iya kuthi ibhaqe ngokuzenzekelayo xa ifowuni iqhagamshele kwaye itshintshe uqhagamshelo lwayo lwe-intanethi ukuyisebenzisa. Abathengi banokukhetha i-Ethernet okanye eyona nto iphambili kwifowuni, eyenza ukugcinwa kwefowuni kwi-intanethi ngokuzenzekelayo.
Ukwanda kokuhambelana, iBlackmagic Web Presenter ikwanonxibelelwano lwe-USB ezimbini ezisebenza njengomthombo wekhamera yewebhu elula. Oko kuthetha ukuba abathengi banokufaka kuyo nayiphi na ikhompyuter kwaye basebenze ngayo nayiphi na isoftware yevidiyo. Isoftware ikhohlisiwe ekucingeni ukuba umbonisi wewebhu yikhamera yewebhu eqhelekileyo, kodwa ngumthombo wevidiyo yosasazo esemgangathweni. Oko kuqinisekisa ukuhambelana ngokupheleleyo nayo nayiphi na isoftware yevidiyo kunye nesisombululo esipheleleyo esingu-1080 HD umgangatho. Umenzi weWebhu usebenza nayo nayiphi na isoftware yevidiyo kubandakanya iZoom, Amaqela eMicrosoft, iSkype, uMsasazi oVulekileyo, umsasazi weXSplit kunye nokunye.
Izixhobo zosasazo zemveli zizixhobo ezibaluleke kakhulu kwisikhululo sikamabonwakude, nangona kunjalo ngoku iseva yokusasaza ibaluleke kakhulu kuba izigidi zababukeli zinokubukela kwihlabathi liphela. Ukunceda, iBlackmagic Web Presenter ibandakanya into etyebisayo yokujonga ubugcisa. Iziphumo zokubeka esweni kwimizobo kubandakanya umbono wevidiyo, iimitha zokulalelwayo ezinee-ballistics ezichanekileyo, iigrafu zedatha yeedatha zekhowudi kunye nokuzaliswa kwe-cache, kunye nesishwankathelo soseto lokusasaza kunye nolwazi oluneenkcukacha lwe-SDI. Kwaye imveliso yokubeka iliso kubuchwephesha isebenza ngokupheleleyo kwi-1080 HD kunye neziphumo kuzo zombini i-SDI kunye HDMI. Oko kuthetha ukuba abathengi banokusebenzisa umzila we-SDI ukubeka esweni iiyunithi ezininzi, okanye ukudibanisa elula HDMI TV.
Isoftware yeBlackmagic Web Presenter Utility ibonelela ngendawo enye yokulawula ababonisi bewebhu abaninzi kunye nokuhlaziya useto kunye nesoftware. Cofa nje ngokuthe ngqo ngaphambili kunxibelelwano lwe-USB yomsasazi wewebhu, okanye uqhagamshele usebenzisa i-Ethernet ukuze abathengi bakwazi ukumisela kude, nto leyo ebalulekileyo xa abasebenzisi belawula iisayithi ezininzi ezikude. Iimenyu eziqhelekileyo kunye nolawulo zenza kube lula kakhulu ukuseta umcimbi obukhoma, ke abathengi banokuqalisa ngokukhawuleza. Kwaye iipaneli zangaphambili zeemenyu zeLCD zinoseto kunye nolawulo olufanayo. Isoftware yeBlackmagic Web Presenter Utility ifakiwe simahla kwaye isebenza kuzo zombini iiplatifti zeMac kunye neeWindows.
Ummeli weBlackmagic Web Present ubandakanya igalelo le-12G-SDI ngenkxaso yabo bonke HD kwaye Ultra HD ifomathi ukuya kuthi ga kwi-2160p60. Iziphumo ze-12G-SDI loop zibandakanyiwe zenza ukuba abathengi bakwazi ukuvula ividiyo ngokusebenzisa umboniso wewebhu ongaphezulu kwesinye, ke abathengi banokusasaza baye kwiinkonzo ezininzi. IBlackmagic Web Presenter ineempawu zetekhnoloji yokuguqula iTeranex kwigalelo le-SDI kwividiyo ekhangeleka ngendlela ecocekileyo. I-Blackmagic Web Presenter ithatha into engenayo HD or Ultra HD igalelo kwaye iliguqulela ngokuzenzekelayo kumgangatho ophezulu, kumgangatho wedatha ophantsi kwi-1080p HD, Ithunyelwa kwihardware H.264 encoder yokusasaza kunye nakwikhompyuter xa usebenzisa iziphumo zekhamera yewebhu ye-USB.
IBlackmagic Web Presenter ibandakanya izinto ezingafunekiyo ukunceda ukuqinisekisa ukuba abathengi bahlala kwi-Intanethi. Abathengi bafumana uqhagamshelo lwe-intanethi ezimbini, ke abathengi banxibelelana kwi-intanethi basebenzise eyakhelwe kwi-Ethernet okanye kwifowuni ebotshelelwe ye-5G okanye idatha ye-4G. Kwaye i-intanethi iyazitshintshela ngokuzenzekelayo kwimeko yokuphuma. Okanye abathengi banokusebenzisa iiyunithi ezi-2 ezahlukeneyo ukusasaza kuzo zombini iiseva eziphambili nezesekondari ze-YouTube. Ngamagalelo amabini e-AC kunye ne-DC, abathengi banokusebenzisa ipakethe yebhetri yokusasaza yamandla angafunekiyo.
Ngelixa iBlackmagic Web Presenter ingathumela ividiyo kuluhlu olubanzi lweenkonzo zokusasaza, inokusetyenziswa njengosasazo lwangasese lwevidiyo ye-SDI phakathi kwe studio. Ibhulorho yokusasaza ye-ATEM sisiguquli sevidiyo esivumela abathengi ukuba bafumane umsinga we-H.264 kwiBlackmagic Web Presenter emva koko bayiguqulele kwividiyo ye-SDI. Oku kuthetha ukuba abathengi banokuthumela ividiyo phakathi kweendawo ezikude kwinethiwekhi yabo ye-Ethernet, okanye nge-intanethi kwihlabathi jikelele. Yonke le nto inokwenzeka ngenxa yokwakheka kwi-H.264 yeekhompyuter zekhompyuter ezimisela umsinga we-Web Presenter.
Ummeli weBlackmagic Web Presenter usekwe kwimodyuli yeTeranex Mini yoyilo evumela ukuba kusetyenziswe i-desktop okanye i-rack. Uyilo oluphatheka ngokugqibeleleyo zii-intshi ezi-5.5 kuphela ububanzi, oko kuthetha ukuba abathengi banokunyuka i-3 kwiyunithi enye ye-rack, egqibeleleyo xa abathengi befuna ukusasaza kwiinkonzo ezizimeleyo ezininzi ngexesha elinye. Ngaphezulu abathengi banokudibanisa iBlackmagic Web Presenter kunye nezinye iimveliso ezinje ngeTV yeTV yeTV HD iswitshi yemveliso ephilayo kunye nesisombululo sokusasaza kwiyunithi enye yokubeka.
"Sonwabe kakhulu ukuba nale modeli intsha yeWeb Presenter ngoku enazo zonke izinto zokusasaza ezakhelweyo," utshilo uGrant Petty, CEO, Blackmagic Design. “Oku kuthetha ukuba awudingi nasiphi na isoftware yokusasaza kuba iya kusinga ngqo kwiinkonzo ezinjengeYouTube, kodwa ngenxa yokuba isagcina inqaku lewebhu le-USB, ungayisebenzisa nayo nayiphi na isoftware yekhompyuter, enje nge Zoom kunye ne-Skype. Khawufane ucinge ukusasazwa bukhoma, ngelixa usenza inkomfa ne-Zoom, zonke ngaxeshanye. Kwaye inesiphumo esimangalisayo sokujonga esineenkcukacha ezininzi zobuchwephesha ndicinga ukuba abasasazi baya kuyithanda. Luhlaziyo olunomdla lokusasaza ngqo. ”
Umnxibelelanisi wewebhu we-Blackmagic HD Iimbonakalo
Gqibezela isisombululo sokusasaza seYouTube, Facebook, Twitter kunye nokunye.
Uncedisa ukusasazwa nge-Ethernet okanye iifowuni ezixhaswayo nge-USB.
Yakhelwe kumgangatho osasazo wehardware H.264 encoder.
IiTether ukuya kwiifowuni ze5G okanye ze4G zokusasaza okukude.
I-USB ijongeka njengekhamera yewebhu evumela inkxaso kuzo zonke iisoftware zevidiyo.
Iziphumo zokubeka iliso kubandakanya iimitha, iigrafu zokuhamba kunye nedatha yobuchwephesha ye-SDI.
Kubandakanya isoftware yokuNikezela ngeWebhu kwi-Mac nakwiWindows.
Igalelo le-12G-SDI ngokuguqula ezantsi kuyo nayiphi na into HD or Ultra HD umthombo.
Zombini unxibelelwano lwe-AC kunye neDC luvumela amandla angafunekiyo.
1/3 uyilo lobubanzi be-rack luvumela imijelo emi-3 kwiyunithi enye yokubeka.
Ukufumaneka kunye neNtengo
Umnxibelelanisi wewebhu we-Blackmagic HD iyafumaneka ngoku nge-US $ 495, ngaphandle kwemisebenzi yasekhaya kunye neerhafu, ukusuka Blackmagic Design abathengisi emhlabeni jikelele.
Imifanekiso yeefoto zeBlackmagic Web Presenter HD, kunye nazo zonke ezinye Blackmagic Design iimveliso, ziyafumaneka www.blackmagicdesign.com/media/images.
Blackmagic Design Ukudala iimveliso eziphambili zeemveliso zevidiyo, iikhamera zedijithali zedijithali, i-color corresters, i-converters yevidiyo, ukujonga ividiyo, ii-routers, iitshintshi zokuvelisa iifayile, ii-disk rekodi, i-monitor monitors kunye ne-real-time scanners ifilimu yefilimu, ukuveliswa kwemveliso kunye ne-TV. Blackmagic DesignAmakhadi okuthabatha i-DeckLink aqalise i-revolution kumgangatho kunye nokukwazi ukufikelela kwimveliso yokuposa, ngelixa umklomelo we-Emmy ™ wenkampani uzuze i-DaVinci imveliso yokulungiswa kwembala iye yalawula imboni ye-TV kunye nefilimu ukususela kwi-1984.
Blackmagic Design iyaqhubeka nokuphulwa kwezinto ezisetyenziswayo kuquka i-6G-SDI kunye ne-12G-SDI iimveliso kunye ne-stereoscopic 3D kwaye Ultra HD usebenza. Eyasungulwa ngabahleli bezithuba ezihamba phambili behlabathi kunye neenjineli, Blackmagic Design ineofisi e-USA, e-UK, eJapan, eSingapore nase-Australia. Ngolunye ulwazi, nceda uye ku www.blackmagicdesign.com.
"Iintetho zeSartorial" Isiteshi seYouTube sakha iStudiyo sokuSasaza kunye noYilo lweBlackmagic - Februwari 24, 2021
I-St. John Ambulance ixhomekeka kwi-ATEM Mini ngexesha loBhubhane - Februwari 24, 2021
Inkwenkwezi enkulu yaseBritane ithi iQhekeze ngeKlasi kwi-Intanethi nge-ATEM Mini Pro ISO - Februwari 24, 2021
Blackmagic Design I-Blackmagic Web Presenter HD 2021-02-17
Previous: Uyilo lweBlackmagic Yazisa ngeKhamera eNtsha yeBlackmagic Pocket Cinema 6K Pro
next: Uyilo lweBlackmagic ibhengeza i-ATEM Mini yokuGqibela